အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Kantabon - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၀ Reminder: Community Insights Survey
၁၁ We sent you an e-mail
၁၈ January 8th 2022
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၁၅:၁၇၊ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ မကြာမီက သင်ဖန်တီးလိုက်သော စာမျက်နှာThein Sein's Cabinet ဟာ စာမျက်နှာသစ်များအတွက် ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အချို့နဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက် (မဖယ်ရှားရသေးပါက) မကြာမီအတွင်း ဖယ်ရှားခြင်း ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ စမ်းသပ်မှုများကို sandbox မှာ ပြုလုပ်ပေးပါ။ ဆောင်းပါးများ ဖန်တီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နောက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက် သင်၏ ပထမဆုံး ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ တည်းဖြတ်ရေးသားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာနိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မိတ်ဆက် စာမျက်နှာကိုလည်း ဖတ်ရှုပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၆:၃၅၊ ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မင်္ဂလာပါ။ Technological University, Mandalay အမည်ရှိတဲ့ စာမျက်နှာအသစ်ကို သင်ဖန်တီးလိုက်တာကို သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ ပါဝင်ရေးသားမှုကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီးယားဟာ သင်ကဲ့သို့သော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ကံမကောင်းလှစွာပဲ သင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ခေါင်းစဉ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) အမည်နဲ့ စာမျက်နှာတစ်ခု ရှိနှင့်ပြီး တူညီနေတဲ့အတွက် သင့်ဆောင်းပါးကို မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ ဤသည်မှာ သင့်အပေါ်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ သုံးသပ်ချက်ပေးတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားစေလိုပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီးယားကို တိုးတက်လာစေဖို့ သင်ဆက်လက် ကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာဟာ သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်ပါက နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) မှာ ဆက်လက်ရေးသားပြီး ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်အသစ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးလိုပါက ဆောင်းပါးရဲ့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာ မှာ ဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၆:၄၁၊ ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကတော့ Ninjastrikers ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက သင်ဟာ ဇော်မြင့်မောင်၊ ဦး မှ အကြောင်းအရာများကို လုံလောက်စွာ ရှင်းပြခြင်း မရှိဘဲ ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။ နောင်အခါ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ သင်ပြုလုပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုများမှာ လုံလောက်တဲ့ တည်းဖြတ်ခြင်း အတိုချုပ်ကို ဖော်ပြပေးနိုင်ရင် အခြားသူတွေအတွက် အကူအညီဖြစ်မှာပါ။ ဒါဟာ မှားယွင်းပြုလုပ်မှုတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုရင် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပြီးပါပြီ။ စမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် sandbox ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ် အမှားပြုလုပ်မိတယ်လို့ သင်ယူဆခဲ့ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် မေးမြန်းစရာရှိတယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာမှာ စာတိုချန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၀၀၊ ၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thanks for contributing in Myanmar Wikipedia. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၄:၀၉၊ ၇ မေ ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မင်္ဂလာပါဗျ။ ဆောင်းပါးသစ်တွေ အများကြီးရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ မြန်မာစာရိုက်ဖို့ ကီးဘုတ်နဲ့ တိုက်ရိုက် ရိုက်တင်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် converter တစ်ခုခုနဲ့ ပြောင်းတင်တာလား သိပါရစေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရေးလိုက်တဲ့ စာတွေထဲမှာ zero-width space လို့ ခေါ်တဲ့ မမြင်ရတဲ့နေရာလွတ်တွေ ပါနေတာ တွေ့ရလို့ပါ။ အထူးသဖြင့် ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်မှာ အဲဒီ zwsp ပါနေတဲ့အခါ လင့်ခ်ချိတ်တဲ့နေရာမှာ အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်လဲ တွေ့ရင် လိုက်ရွှေ့ပေးနေပါတယ်။ တကယ်လို့ firefox အတွက် Myanmar Converter plugin လိုမျိုး ထည့်သုံးထားရင် setting ထဲက zwsp ကို ပိတ်ထားဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ အခက်အခဲရှိရင်လဲ ပြောပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၇:၄၉၊ ၇ မေ ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
​တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကီးဘုတ်နဲ့တိုက်ရိုက် ရိုက်လိုက်မိလို့ဖြစ်သွားတာပါခင်ဗျ။zwspကိုသတိထားပြီးပိတ်​လိုက်ပါ့မယ်။​ကျေးဇူးပါဗျ။ Kantabon (ဆွေးနွေး) ၁၀:၄၈၊ ၉ မေ ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မြန်မာလူမျိုး လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့နာမည်တွေကို အမည်ပေးတဲ့အခါ နာမည်တူဆိုရင် ကွဲပြားအောင် ရာထူး တစ်ခုခုနဲ့ ကွင်းစကွင်းပိတ်ခံလိုက်ရင် အဆင်ပြေပြီလို့ ယူဆမိပါတယ်။ နောက်က ပုဒ်ကလေးခံပြီး ဦး၊ ဒေါ် ခံနေရင် interlink ချိတ်တဲ့အခါ အလုပ်များပါတယ်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၅:၃၃၊ ၁၉ မေ ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ Kantabon (ဆွေးနွေး) ၀၁:၀၄၊ ၂၀ မေ ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မင်္ဂလာပါ အစ်ကိုရေ။ မြန်မာဝီကီအတွက် ဆောင်းပါးသစ်တွေ အများကြီး ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဝါကျရှည်တွေ ရေးတဲ့အခါမှာ ဆီလျော်တဲ့နေရာတွေမှာ space လေးတွေ ခြားပြီး ရေးမယ်ဆိုရင် ဖတ်ရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ်လို့ အကြံပြုလိုပါတယ် အစ်ကိုရေ။ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်တွေ နောက်မှာ (၊ ။)၊ စကားစုတွေ နောက်မှာ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့ ရှေ့နောက်မှာ space ခံပြီး ရေးမယ်ဆိုရင် ဖတ်ရှုတဲ့သူအတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျ။ အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၁၆၊ ၁၃ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RMaung (WMF) ၁၄:၃၃၊ ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RMaung (WMF) ၁၅:၀၉၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RMaung (WMF) ၁၉:၀၁၊ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
enwiki မှာထက် ဒီမှာပြောရတာ အန္တရာယ်ကင်းမယ်ထင်လို့ပါ ဆရာရေ။ ဆရာ နေ့လယ်က Min Aung Hlaing နဲ့ တခြားဆောင်းပါးတွေမှာ SAC က dissolve မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီး လာပြင်တာ ကျနော်တွေ့လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကို Tartan ဆိုတဲ့ စစ်တပ်ပိုင်းဆောင်းပါးတွေကို patrol လုပ်နေတဲ့သူက မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ပြန်ပြင်ပါတယ်။ အဲဒါ ဆရာ ပိုပြီး strong and reliable ဖြစ်မဲ့ citation လေးတွေ ထည့်ပေးစေလိုပါတယ်။ အခု အဲဒီကိစ္စက နည်းနည်းလေး ပြဿနာတက်နေလို့ပါ။ ကျနော်ကလဲ အဲဒီအပိုင်းတွေ သိပ်မသိတော့လေ။ ကျေးဇူးပါ။ Htanaungg (ဆွေးနွေး) ၁၀:၀၂၊ ၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အချက်အလက်များပြန်လုပ်ပါ ("ယှဉ်ပြိုင်မှုများ"ဖတ်ပါ "ဆုတံဆိပ် မှတ်တမ်း"ဖတ်ပါ)၊ မသက်ဆိုင်သောအင်္ဂလိပ် link ကျေးဇူးပြု၍ စည်းကမ်းချက်ကိုဖတ်ပါ။ ဒါတွေလက်မခံဘူး Jebat2 (ဆွေးနွေး) ၀၅:၂၀၊ ၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နာရီလုံး ဖတ်ကြည့်ပေမဲ့ ဘာကိုဆိုလိုချင်မှန်း မသိရပါဘူး။တစ်ဝက်တစ်ပျက် မြန်မာစကားတွေနဲ့ ကြည့်ရတာ ဘာသာပြန် applicationတွေ အသုံးပြုထားတယ်ထင်ပါတယ်။U-23 အသင်းစာမျက်နှာကို ဘယ်လိုကြောင့် မြန်မာစကားကို အခြေခံတောင်မကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေက အကောင့်အသစ်တွေ ဖွင့်ဖွင့်ပြီး လာပြင်နေကြလည်းဆိုတာ နားတောင်မလည်တော့ပါဘူး။
ကြည့်ရတာ အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအကြောင်း infoboxမှာထည့်သွင်းတာကို ပြောချင်နေတာနဲ့တူပါတယ်။သိရသလောက်တော့ infoboxဆိုတာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အကျဉ်းချုပ်ပြီးတင်ပြရတဲ့ဟာပါ။infoboxမှာပါသမျှတွေ အကုန်အောက်က ခေါင်းစဉ်ခွဲတွေမှာ အကုန်ပါပါတယ်။အောက်မှာပါလို့ အပေါ်မှာမပါရဘူးဆိုတာတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။အဲ့လိုဆိုရင် infoboxတောင် ထည့်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။
မြန်မာစကားကို အခြေခံတောင်အသုံးမပြုတတ်တဲ့သူတွေက မြန်မာဝီကီမှာ ပိုပိုကဲကဲတွေလာလုပ်ပြနေတာကိုလည်း လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ကျေးဇူးပါ။
(undo မှာ အကြောင်းပြချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။myanglishနဲ့ ရေးလိုက်လို့ နားမလည်ဖြစ်သွားတာနဲ့တူတယ် :3) ●Kantabon● ၀၇:၁၀၊ ၁၅ ​အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
ကြူကြူလှပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ ဝန်ကြီချုပ်၏ ဇနီး လို့ရေးတော့ ဘာလို့လဲ? နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်လို့ရေးဖို့က သူ့လင် ကို ဘယ်နိုင်ငံကမှ အသိအမှန် ပြုမထားသလို။ သူဖာသာ ဖန်တီးယူထားတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၁၂:၁၈၊ ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဘယ်နေရာမှာမှ မသုံးတဲ့အသုံးကြီးကို infoboxလိုနေရာမှာ ထည့်သုံးတာ မသင့်လျော်ပါဘူး။ ဥပမာ- ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အခွင့်အာဏာတူသလောက်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတို့၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆိုပြီး သုံးစွဲခြင်း မရှိပါဘူး။ မင်းအောင်လှိုင်မှမဟုတ် အရှေ့က စစ်အစိုးရခေတ်ကဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုလည်း နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်လို့ သုံးခဲ့ကြတာပါပဲ။ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ မပြုခြင်းကိစ္စတွေကိုတော့ အာဏာသိမ်းပြီးခါစက မြန်မာဝီကီရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားပါ။ အဲ့တုန်းက ဆွေးနွေးချက်တွေကို ပြန်ရှာပြီး ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ ဝီကီကို ရောက်လာတာ (၂)လမပြည့်​သေးတော့ ဒါတွေ မမီလိုက်ဘူးထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အခုတလောတွေ့ရတဲ့ ပြင်ဆင်ချက်တွေမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားချက်တွေ များလွန်းနေပါတယ်။ နောက်ပြီး ဝီကီမှာသုံးဖို့ မသင့်လျော်တဲ့ အရပ်သုံးစကားတွေပေါ့။ မြန်မာဝီကီက စွယ်စုံကျမ်းပါ။ စွယ်စုံကျမ်းဆိုတာ တင်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံးပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြရမှာပါ။ referenceယူတဲ့ သတင်းဌာနတွေက ဘယ်လိုပဲ အရပ်သုံးနဲ့ရေးရေး ဝီကီမှာတော့ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ အသုံးတွေနဲ့ပဲ ရေးသင့်ပါတယ်။ အချိန်ရရင် ဦးနုလက်ထက်ကနေ ဦးနေဝင်းလက်ထက်အထိ ထုတ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းတွေရယ်၊ အခုအထိထုတ်နေတဲ့ စွယ်စုံကျမ်းနှစ်ချုပ်တွေရယ်ကို ရှာဖတ်ကြည့်ပါ။ အလွယ်တကူလည်း ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်သလို ရန်ကုန်မှာဆို စာပေဗိမာန်တို့၊ ပြန်/ဆက်တို့၊ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်တွေမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်နိုင် ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ မတူတဲ့အမြင်၊ နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေရှိတဲ့ အစိုးရအဆက်ဆက်က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပေမဲ့ စွယ်စုံကျမ်းမှာတော့ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ အသုံးတွေ သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ဥပမာ- ဦးသိန်းသိန်အစိုးရရော၊ ဦးထင်ကျော်အစိုးရပါ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ခုနှစ်အတွက် စွယ်စုံကျမ်းနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇ကိုကြည့်ပါ။ ဒီလိုပဲ မြန်မာဝီကီမှာလည်း ငါမကြိုက်လို့ဆိုပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးတွေ သုံးတာ မသင့်လျော်ပါဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားချက်တွေများတာကတော့ စသုံးခါစလူတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အကိုလည်း စသုံးခါစက ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားချက်တွေ များခဲ့ဖူးပြီး ဝီကီရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေဘာတွေနားမလည်ပဲ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာဝီကီရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ မြန်မာဝီကီကို တိုးတက်အောင်ကူညီပေးပါဦး။ ကျေးဇူးပါ ငါ့ညီ။ ●Kantabon● ၁၃:၀၈၊ ၁၆ ​ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
အစ်ကို ပြောတဲ့စာအုပ်တွေ သားမှာ မရှိဘူးဗျ။ download ဆွဲပြီး ဖတ်ဖိုကျတော့ computer က ဟမ်းနေတယ်။ ဖုန်းကလည်း screen သေးနေတယ်။ မျက်မှန်လည်းတပ်တယ် ဆိုတော့ အမေက ဖုန်းနဲ့ မဖတ်ခိုင်းဘူး။ ဦးနု ရဲ့ စာအုပ်ဆိုရင် ၅နှစ်ရာသီ ဗမာပြည် နဲ့ တာတေ စနေသား တော့ရှိတယ် အစ်ကို။ အဲ့ စာအုပ်တွေဆို အဆင်ပြေ မလား။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၃:၂၂၊ ၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi[အကြောင်းပြန်ရန်]
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန မှာ ဘယ်အစိုးရ အဖွဲ့ကိုမှ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုထားတာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့တော့ ၂ဘက်လုံးက ခန့်ထားသူတွေကို ရေးတာဟာ ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၈:၂၆၊ ၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဘယ်သူကမှ အသိအမှတ်ပြုသည်ဖြစ်စေ မပြုသည်ဖြစ်စေ လက်ရှိမှာ အမှန်တကယ် အာဏာကို လက်ဝယ်ကိုင်ထားနေတဲ့ de factoက နစကဘက်က ဝင်းရှိန်ပါ။ NUGဘက်က ဝန်ကြီးကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။●Kantabon● ၉:၁၆၊ ၂၂ ​ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
မဂ်လာပါဗျ။ ကျနော် မင်းအောင်လှိုင် မှာ ရေးထားတာတွေကို နောက်ပြန်ပြင်လိုက်တယ် ဆိုတာသတိထားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကို က နောက်ပြန်ပြင်ရတဲ့ အကြေင်းအရင်းကို မပြောခဲ့ပါဘူး? ကျနော့်ရဲ့ ရေးသားမှုဟာ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မေတာကြေင့်ပြန်ပြင်ရတယ် ဆိုတာလဲ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ကျေးဇူးပြပြီးတော့ လုပ်ရတဲ့ အကြေင်းအရင်းကို ပြောပြပါ။ Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၁:၀၂၊ ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)Editor in Myanmar[အကြောင်းပြန်ရန်]
ပြောနေစရာမလိုတောဘူး bro...အရင် အကောင့်မှာကတည်းက ပြောထား၊ ဆွေးနွေးထားတာတွေကို bro အကုန်သိပြီးလောက်ပြီနေမှာပါ။●ကန္တပုံ● ၁၂:၀၀၊ ၈ ​ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)
January 8th 2022[ပြင်ဆင်ရန်]
အရင်အကောင့်မှာဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုတာတော့ကျနော်လဲသိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုတစ်ခေါက်က အရင်တုန်းကလို ပေါက်ကရတွေရေးတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၂:၄၁၊ ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)Editor in Myanmar[အကြောင်းပြန်ရန်]
အရင်ကဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲ စွယ်စုံကျမ်း ပုံစံရေးတာပဲကောင်းပါတယ်။ ဥပမာ- ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ခန့်ပြီး ဝန်ထမ်းဆောင် နေသည်။ ဆိုတာက စွယ်စုံကျမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ အပေါစားဆန်ပါတယ်။ (အခုအချိန်အထိတော့ ပေါက်ကရတွေရေးတာ မတွေ့သေးပါဘူး။ ရှေ့လျှောက် မရေးဖို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်)●ကန္တပုံ● ၁၃:၂၀၊ ၈ ​ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)
ပေါက်ကရရေးဖို့အစီအစဉ်ကတော့လောလောဆယ်မရှိပါဘူး။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် အရင်ကရေးခဲ့တာတွေကို လည်း နောင်တရပါတယ်။ "နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ခန့်ပြီး ဝန်ထမ်းဆောင် နေသည်"လို့ရေးတာကို အပေါစားဆန်တယ်လို့ထင်ရင်တော့ ကျနော်လည်း လောလောဆယ် ဒီထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ စကားလုံး စဉ်းစားလို့မရသေးဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ခန့်တယ်ဆိုတာကတော့ english wikipedia မှာ self appointed လို့ရေးထားတာကို ဘာသာပြန်လိုက်တာပါ။ မကြိုက်ရင်တော့ ကျနော်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၃:၄၅၊ ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)Editor in Myanmar[အကြောင်းပြန်ရန်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Kantabon&oldid=729276" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။